Nsogbu na "Nnukwu data" | Martech Zone
Nsogbu nke “Nnukwu data”
Wednesday, April 9, 2014 Saturday, January 14, 2017 Douglas Karr
Otu n'ime okwu ndị ama ama nke yiri ka ọ na-apụta na teknụzụ ọ bụla ugbu a bụ nnukwu data. Echere m na ụlọ ọrụ ahụ na-eme ihe na-adịghị mma site n'iji ya eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi na foto na-ezighi ezi ọ na-egosi ihe na-eme n'ezie.
Nnukwu data bụ buzzword, ma ọ bụ ahịrịokwu njide, ejiri kọwaa oke olu nke data ahaziri ahazi na nke edozighi nke buru ibu nke na o siri ike ịhazi iji usoro nchekwa data ọdịnala na usoro ngwanrọ. Dabere na Weebụ
Nsogbu bụ na nnukwu data abụghị naanị a nnukwu nchekwa data. Nnukwu data bụ isi na-akọwa nkọwa 2. Nsogbu bụ na ụlọ ọrụ anaghị alụ ọgụ nnukwu ọdụ data, ha na-agba ọsọ nke data ahụ. Nnukwu iyi data na-abịa na ezigbo oge nke a ga-edozi ma gosipụta ya n'ụzọ na-enye nyocha nke ihe na-eme n'oge.
Ekwenyere m na nkọwa ziri ezi nwere ike ịbụ Gụgharia data. Gụgharia data nwere nkwa nke ịchọta ihe ọmụma nke ndị ahịa nwere ike ịba uru, yana ozugbo, trending na amụma nyocha nke nwere ike inye ndị na-ere ahịa ohere iji dozie usoro ha iji bulie nsonaazụ. Sistemụ nwere ike ịhazigharị, ebe ndebe akụkọ, chee ma buo amụma maka anyị iji mezuo nnukwu iyi data dị.
Ekwela ka ndi nzuzu site na ire ahia kwue nnukwu data. Ihe ngwọta dị ugbu a iji hazie ọtụtụ data. Kpatụ Gụgharia data bụ ihe anyị chọrọ n'ezie.
Tags: nnukwu dataGụgharia data
Andhụnanya na Alụmdi na Nwunye - The Agency Version
Apr 9, 2014 na 4: 45 PM
Ekwenyere m kpamkpam na nkọwa gị na otu esi "nnukwu data" abụrụla okwu ọkụ ọkụ. Mụ na onye ọrụ ibe m na-enwe mkparịta ụka n'ụtụtụ a banyere "okwu uzu."
Nsogbu bụ, n'iji ya eme ihe gabiga ókè, ị na-eme ka eziokwu ahụ dị na ya pụta ihe kpatara ya ruo mgbe ọtụtụ ndị nụrụ ma jiri ya na-aghọtaghị ya. Ihe yiri nke ahụ mere na "igwe ojii igwe ojii" na ndepụta na-aga n'ihu.
Apr 11, 2014 na 9: 12 PM
Maa nnukwu ọgụgụ. Ọ bụ ezigbo ihe ọmụma Doug, ekele maka ịkekọrịta!.
Apr 14, 2014 na 3: 06 PM
Akwa isiokwu Doug. Ppingmepụta data iyi egwu bụ isi! Chịkọta data sitere na sistemụ dị n'ime na mpụga, na-esonye ya na oge, na-ehicha data ahụ, ma eleghị anya mee ụfọdụ ihe na-adịghị mma ma wepụta nghọta, ịdọ aka ná ntị na ọkwa iji mee ka ọ rụọ ọrụ bụ ihe mara mma. Ndị ụlọ ọrụ ndị nwere ike ịkwaga ahịa ha na ezigbo oge ga-enwe nnukwu uru. Otu ụlọ ọrụ nwere ike ịmalite iji data gụgharia iji nweta mmeri ngwa ngwa site na imepụta ngọngọ nke 10-15%, mana n'oge na-adịghị anya ha ga-ahụ na ọ nwere uru mgbakwunye na nrụpụta ha, ire ahịa, mbupu, mmezu, wdg. .